Vahao ny olana… | NewsMada
Vahao ny olana…
Par Taratra sur 03/07/2018
Tsy fotoan’ny resabe intsony izao fa famahana olana avy hatrany… Vahao ny olana. Betsaka loatra ny fitakiana sy ny raharaha tokony handraisana fanapahan-kevitra eto amin’ny firenena. Tsy afa-bela amin’izany ny eny Iavoloha. Tsy vitan’ny kabary na fandehanana atsy sy aroa izany na handaniana volam-bahoaka amin’ny fivoahana any ivelany, tsy misy ifandraisany amin’ny ativilanin’ny vahoaka. Mitaky andraikitra sy fepetra haingana ireo tranga miseho amin’ny sehatra rehetra amin’izao fotoana izao. Aoka tsy hisy ny fitanilana na fitongilanana ka hanomezana tombony na vahana ny hafa nefa tsy hamaliana ny fitakiana na ny hetsika mahazo laka etsy sy eroa. Hatramin’ny rahoviana na hiandrasana inona vao hovahana izao olana samihafa eto amin’ny firenena izao? Tsy tokony hailika amin’ny hafa na hanondrona ny teo aloha ny tsy fahombiazana eo amin’ny fitantanana. Efa eo ianao, raiso ny andraikitra ary vahao ny olana. Midika ho tsy fananana vina na koa tsy fahaizana mitsinjo lavitra izao zava-misy izao. Tsy manana vahaolana matotra sy mipetraka tsara ary voarindra fa zatra ny petatoko sy vonjy tavanandro na koa famonoana afo, isaky ny mihetsika. Iandrasana mihetsika sy efa mirehitra hatrany ny afo vao mikoropaka. Tsy mahagaga raha mipoitra avokoa ny sehatra rehetra tsy faly manoloana ny tsy fahaiza-mitantana. Tsy vitan’izany fa mbola misavika izao hetsika rehetra izao, hisehosehoana sy hilazana fa mbola eo. Tsy afa-bela amin’izany ny fiangonana, ny fotodrafitrasa madinika tokony hotokanan’ny ben’ny Tanàna na lehiben’ny distrika, idirana sy itsabahana avokoa.
Etsy andaniny, tsy hita ny vahaolana amin’ny sosialim-bahoaka. Ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana, ny tsy fananana asa, ny ady amin’ny kolikoly… Soa fa mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary ny vahoaka ary efa mahalala ny tokony haifika rehefa tsy mahavaha olana…